Ọkachamara Semalt: Otu esi gbasaa Scam Paypal
Julia Vashneva, Onye Ọrụ Ndị Na - ahụ Maka Nlekọta Ndị Ọrụ nke Semalt Ọrụ Ntanetị, kọwakwuru nsogbu ndị ahụ ma kọọrọ ya ahụmahụ ya.
Na nso nso a, m kpebiri ire obere ụgbọ mmiri m ka m nwee obere oge iji ya n'agbanyeghị ịhụnanya m maka oké osimiri. Ụgbọ mmiri ahụ dọtara mmasị dị ukwuu ma ọ bụghị otu okwu ọjọọ nke m nwetara n'oge ụfụ - download free slot without. Nke mbụ, ụgbọ mmiri m bụ otu n'ime obodo a rụrụ maka azụmahịa Finland. Achọpụtara m na ọ dị ịtụnanya na-eresị ya nwanyị na Mexico ebe ọ ga-abụ ihe dị njọ. E wezụga nke ahụ, anọgidere m na-eche ihe mere nwanyị a ji chọọ ụdị ihe a, nke dị na Atlantic. Ego ole ka ọ ga-efu ya iji bupu ya na Mexico? Echeziri m na ụgbọ mmiri m dị oke ala ma ọ bụrụ na ị ga-atụgharị uche na njem ụgbọ mmiri gafee Atlantic. Ka o sina dị, ịzụrụ na mbupu ụgbọ mmiri sitere na Europe enweghị ike ịtụle obere ụgbọ mmiri na-efu ọnụ na nnukwu ego na North America.
N'ụzọ dị ịtụnanya, onye ahụ zụrụ azụ gosiri obere mmasị na ụgbọ mmiri ahụ. O yiri ka ọ siri ike ịzụta ya n'eleghị ya anya na mbụ buru n'uche na ọ bụ nanị otu ajụjụ dị na ọnụahịa e mere n'enweghị mkpa maka nkọwa. Aghọtara m na scammer agaghị etinye ọtụtụ ajụjụ na ọnụahịa ma ọ bụrụ na ha ebughị n'uche ịkwụ ụgwọ ọ bụla. N'ezie, a na-enyekwu ajụjụ banyere usoro ịkwụ ụgwọ kama iji ụgbọ mmiri ahụ n'onwe ya ma ọ bụ ikike ya..N'ikpeazụ, onye na-ere ahịa kwesịrị ịbụ onye na-enyocha usoro ịkwụ ụgwọ mgbe onye zụtara chọrọ nyocha maka ihe akaebe nke inwe.
Mgbe anyị na-enyocha nmalite mkparịta ụka anyị, achọpụtara m na iji asụsụ ire ere na-ebido nhazi. Asụsụ ahụ nwere ike ịrụ ọrụ maka ụdị ngwá ahịa ọ bụla nwere ike ịpụ n'ebe ahụ ka ọ bụrụ naanị ụgbọ mmiri, ọ naghị enwe nsogbu ma ọ bụrụ na ọ dị mma. N'ikwu okwu anyị ọzọ, ọ bịara doo anya na PayPal bụ naanị ụdị ịkwụ ụgwọ a na-anabata ma na-anabata. Echere m na ọ bu n'uche ka ọ bụrụ na ọ ga-adịrị ha mma. Achọkwara m na ọ dị ịtụnanya na m ga-akwụ ụgwọ maka ụlọ ọrụ na-ezigara ụlọ ọrụ gị nke adreesịghị adreesị nke ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe anyị na-akparịta ụka, onye na-azụ ihe nọgidere na-eleghara arịrịọ na ajụjụ m anya mgbe ọ na-aza naanị mgbe usoro ahụ gbanyere. N'ịmara otú PayPal si arụ ọrụ, m ghọtara ngwa ngwa na azụmahịa ahụ bụ ojoro.
Na nyochaa ọzọ nke onye zụtara ya, achọpụtara m na paspọtụ ya bụ British n'agbanyeghị na ọ na-eji obodo Mexico na nọmba ekwentị. Enwekwara m Googled foto foto ya nke m chọpụtara na nwanyị ọzọ nọ na US. N'ụzọ doro anya, foto a gosipụtara na ọtụtụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mgbe nwanyị ahụ lụrụ dika aha ya. Nke ahụ na-eweta m gaa n'asụsụ ya, olee otú otu onye Europe nke nwere akwụkwọ paspọtụ na American na-akpọsa na-emehie ọtụtụ ihe na mkparịta ụka anyị? Ka ọ dị ugbu a, m na-eme nchọpụta zuru ezu, akwụkwọ paspọtụ ya emezughịkwa ule m. Ihe niile dị na ya dere site na aha, foto, metadata na ọbụna mbinye aka.
Mgbe ọ bịarutere ịbanye na nkwekọrịta, ọ na-enwe nkwekọrịta iji tinye akwụkwọ mpempe akwụkwọ ọzọ site na ihe e nyere na paspọtụ ya. Na-eche na anyị biri n'oge dị iche iche oge, ọ dị ka ihe ijuanya na nwanyị a na-azụ ahịa zara ya niile ozi email m. M na-amịpụta ihe na-azụ azụ, mkparịta ụka ahụ gbanwere n'ịmịnye ego ma mee ka m nwụọ ngwa ngwa. N'ụzọ dị otú a, ana m ezere ihe ojoo ojoo.